သံသယ တရားခံ အောင်ကြီး၏ DNA ကို စိစစ်ပြီးမှ တရားရုံးက ပြန်လွှတ်ခဲ့တာလို့ မိခင်ဖြစ်သူ ပြော
သံသယ တရားခံ အောင်ကြီး၏ DNA ကို စိစစ်ပြီးမှ တရားရုံးက ပြန်လွှတ်ခဲ့တာလို့ မိခင်ဖြစ်သူ ပြော 5
သံသယ တရားခံ အောင်ကြီး၏ DNA ကို စိစစ်ပြီးမှ တရားရုံးက ပြန်လွှတ်ခဲ့တာလို့ မိခင်ဖြစ်သူ ပြော (ရုပ်/သံ)
ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၉
နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ကျောင်းမှာ အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံ ရမှုမှာ မသင်္ကာလို့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရပြီးမှ တရားစွဲတင်ရန် အထောက်အထား မခိုင်လုံလို့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သူ ကိုအောင်ကြီးကို တရားသူကြီးကိုယ်တိုင် DNA တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးပြီး အမှုနဲ့ ငြိစွန်းခြင်း မရှိလို့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရီက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ရိုက်ကူး - ထက်နိုင်ဇော်
တည်းဖြတ် - ဝေယံမိုးမြင့်
အန်​တီ့​သားမဟုတ်​ဘူးဆိုရင်​ ပြန်​တရားစွဲပါ အန်​တီ
Author — Moe Moe
အောင်ကြီးရယ် ညီအကို ၂ယောက်ရယ် ၃ယောက်လုံး ကလေးကို ပြပြီး ဘယ်သူလုပ်လဲမေးရင် ကလေးကတော့ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောမှာပေါ့ သူ့ကိုလုပ်တဲ့သူကို
Author — T M Channel
Author — Cho Cho
မှန်​​နေလို့​ပေါ့ ဒီချက်​နဲ့​တောင်​ သက်​​သေကခိုင်​လုံ​နေပြီ
Author — Thein Sawm
အဲဒါကိုများခက်အောင်လုပ်တယ် cctv ဘာလုပ်ပျက်လဲ ဆရာမနှင်းနုကိုခေါ်မေးလိုက်
Author — Thu Zat
တရာသူကြီလဲးလိမ်တယ် အားလုံးကိုခလေးအရှေခေါ်ပြီ ဘယ်သူလဲးလို့ လက်ငြိုးထိုးပြခိုင်း
Author — nur hidayah chit chit
အဲ့ဒီ ရဲ ရဲ့ သားနယောက်ဆိုတာ သိပ်နေပြီပဲ
Author — Day mi yin
This isaset up.they arrested innocent guy.they need more evidence.Something is terribly wrong.
Author — Tedd Liu
ကိုလှဆွေတွေလည်း မယောင်ရာဆီလူး တရာခံက ဒီလောက်ရှင်းနေတာကို
Author — James Lyan
ငါလိုးမသားတွေ🤬 ကိုယ့်သားအကြီးကျပါမှကြောက်တယ် သူများသားသမီးကျ မစာမနာ ထိုးချတယ် 🤬
Author — Htut Yan
မည်သညု နှာဘူး မဆို၇င်နှီးကျွမ်းဝင် မြင်ဖူးမှသာ အဓမ္မ ပြု ကျင့်သည်။
Author — Piter Gold
မြန်မာပြည်က MPPS ဘွဲ့ယူ ထားတဲ့ ဒေါက်တာတွေ ပါရဂူတွေ ကိုမသိလို့ မေးချင်ပါတယ် ဒလောက်နုနယ်တဲ့ ခလေးကိုဖိုမ ဆက်ဆံလို့ရအောင် ဒလောက် ငယ်တဲ့ခလေးလေးကို ကာမစိတ် ကိုးနှစ်ဆယ်နှစ်ကလေးကို ရတယ်ဆိုလက်ခံသေးတယ်ခုဟာ ကယုပ်တိမရှိဒါကို လူတွေအာရုံ နောက်အောင် လှည့်ကွက်လုပ် တာဆိုလဲတခြားနည်းသုံးကြပါ အပြစ်မရှိ ဘာမှမသိသေးတဲ့က အတော်လေးယုပ်ညံ့တဲ့စိတ်ထားဘဲ ပါးစပ်နဲ့ပြောရဒါတောင်သန တယ်ဗျာ ဖီးလ်
Author — mg nay Win
ဘယ်သူ ဘယ်သူ ကိုမနစ်နာစေချင်ပါဘူး
Author — May thu May thu
အောင်ကြီး အတွက် အာမခံ လျှောက်ပြီ - BBC News မြန်မာ
'သူ မကျူးလွန်ဘူး၊ သူ မလုပ်ဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သားလုံးဝ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်စရာလည်း အကြောင်းမရှိဘူးလိ...
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းသူလေးအမှု - အောင်ကြီးရဲ့မိခင် ဘာပြောလဲ - BBC News မြန်မာ
မူကြိုကလေးအမှု အောင်ကြီး ထပ်အဖမ်းခံရတဲ့အပေါ် မိဘတွေ တုံ့ပြန်မှု - BBC News မြန်မာ
အောငျကွီး တရားရှငျ ပွနျလှတျလိုကျတဲ့ ဒက်ခိဏခရိုငျတရားရုံး အခွအေနေ